पर्यटन मन्त्री Archives - Lokpati.com
Tag - पर्यटन मन्त्री
मन्त्री भट्टराईकाे एक महिना : यी हुन् सन्देशमूलक नाै काम
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना पुगेको छ ।
यसबीचमा उनले नेपाल वायुसेवा निगमलगायत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम...
समाज भड्काउने अराजक गतिविधि सह्य हुँदैनः मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं, ३१ भदाै । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाली समाजलाई भड्काउने खालका उछृङ्खल गतिविधि देखिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधि सह्य नहुने बताएका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिना अगावै सम्पन्न हुन्छ : मन्त्री भट्टराई
पोखरा, ११ भदाै। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकमा सञ्चालित ठूला विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय हुनुका साथै समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पोखरा...
पर्यटनमन्त्री भट्टराईका यी हुन् १४१ महत्वाकांक्षी याेजना (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, ९ भदाै । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनयोग्य बनाउने, ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाइ यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिनेलगायत केही महत्वाकांक्षी योजनासहित आफ्नो...
निजी विमान कम्पनीलाई अन्तराष्ट्रिय स्थलमा उडानका लागि अनुमतिः मन्त्री भट्टराई
काठमाण्डौं, ३० साउन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलाभन्दा सुधार भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
उनले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई थप सुधार गर्दै लगिने...
स्व. अधिकारीको उत्तराधिकारीको रुपमा आएको छु : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आफू स्व. रविन्द्र अधिकारीले उत्तराधिकारीको रुपमा आएको बताएका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारमा आफ्नो पदभार...
नेपाल एयरलाइन्समा क्रान्ति ल्याउँछु : मन्त्री भट्टराई
काठमाडाैं, १५ साउन । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टाराईले नेपाल एयरलाइन्समा क्रान्ति ल्याउने बताएका छन् । उनले एयरलाइन्सकाे साख अझै माथि उठाउने बताएका छन्।
बुधबार साँझ सिंहदरबारमा पदभार...
पर्यटन मन्त्रालयमा आइसियाेस्, गइसियाेस् चल्दैन
काठमाडाैं । नवनियुक्त नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा अब आइस्योस् र गइस्योस् जस्ता भाषा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले कामभन्दा चाकडी बढी गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी...
प्रचण्डद्वारा पर्यटनमन्त्रीमा योगेशलाई प्रस्ताव, ओली मानेनन्
काठमाडौं, ३ चैत । मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । मन्त्री परिवर्तनका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफललाई...
मन्त्री अधिकारीको सम्झनामा रवीन्द्र स्मृति उद्यान पोखरामा
पोखरा, १६ फागुन । पोखरा महानगरपालिका–५ स्थित चिप्लेढुङ्गामा रहेको सूर्यचन्द्र स्मृति वाटिकाको नाम परिवर्तन गरेर रवीन्द्र स्मृति उद्यान राख्ने निर्णय गरिएको छ । सूर्यचन्द्र स्मृति विकास समाजको बुधबार बसेको बैठकले वाटिकाको...